5 Different Uses and Practices of Granite Tiles - Flodeal India
5 ကျောက် Tile ကိုအသုံးပြုခြင်း
Granite tile is an essential component in any building or construction project. တစ်ဦးက tile ကိုပြီးပြည့်စုံညာဘက်ထောင့်နှင့်အတူတစ်ဦးသေးငယ်တဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ်, ပိုကြီးတဲ့အရွယ်အစားတစ်ခုလို့ဆိုရမှာပါကနေဖြတ်သော. သငျသညျထိုကဲ့သို့သော 12 အဖြစ်ယေဘုယျအရွယ်အစားဝယ်နိုင်×12 လက်မ, 12×24 လက်မ, 24×24 လက်မသို့မဟုတ်အခြားစက်ချုပ်အရွယ်အစားနှင့်အထူ. အောက်ပါကျောက်ကွက်များ၏အဓိကအသုံးပြုမှုများမှာ:
အကြွင်းမဲ့အာဏာက Black ကျောက် Tile ကြမ်းခင်း
You can use size such as 60×30 သို့မဟုတ် 60×60 ၏အထူအတွက်2စင်တီမီတာသို့မဟုတ်3အရည်အသွေးမြင့်အခင်းလုပ်စင်တီမီတာ.
ကျနော်တို့၌သင်တို့၏လိုအပ်ချက်များကိုဘို့သင့်ကိုချုပ်လုပ်အုပ်ကြွပ်ဖြတ်ထောက်ပံ့နိုင်ပါတယ်2စင်တီမီတာနှင့်3စင်တီမီတာအထူကျောက်.
သင်တစ်ဦးတသားတည်းပုံစံကိုရှာဖွေနေနေတယ်ဆိုရင်, သင်တို့သည်ငါတို့၏ flowery နှင့်ကြည်လင်ပုံစံအုပ်ကြွပ်နှင့်အတူလိုက်နိုင်ပါတယ်.
သင်သည်သင်၏အခင်းအတွက်ထူးခြားဆန်းပြားစတိုင်များလိုအပ်ခဲ့လျှင်, သင် Wavy နှင့်တိမ်ထူကျောက်စုဆောင်းခြင်းနှင့်အတူသွားနိုင်ပါတယ်.
အဆိုပါကျောက်ကြမ်းပြင်အရှိဆုံးစီးပွားရေးနှင့်တာရှည်ခံ၏တဝတည်းဖြစ်ကြ၏. ကျောက်တစ်ဦးအလွန်ကြာရှည်ပစ္စည်းဖြစ်ပါသည်. ဒါဟာနှစ်ပေါင်းရာချီနေထိုင်နိုင်ပါတယ်.
သင်တစ်ဦးတစ်သက်တာများအတွက်အသုံးပြုပြီးနောက်တူညီတဲ့ grandeur တှေ့လိမျ့မညျ. ဤသည်ကိုလည်းနီးပါးသုညပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုပစ္စည်းဖြစ်ပါသည်, ဒါကြောင့်သင်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုများအတွက်ကြီးမားကျယ်ပြငွေပမာဏကိုပေးဆောင်ဖို့မလိုအပ်ပါဘူး.
Flamed Crystal အဝါရောင်ကျောက် Tile ဝတ်
ကျောက်အုပ်ကြွပ်အလွန်မြို့ရိုးကိုဝတ်အတွက်အသုံးပြုကြသည်. 24 ၏အရွယ်အစားအတွက် tiles×24 လက်မပိုကြီးတဲ့ဧရိယာဝတ်အောင်ပိုမိုလူကြိုက်များ.
သငျသညျကျောက်အုပ်ကြွပ်၏မွို့ရိုးကိုဝတ်ဘို့ Flame သို့မဟုတ် Polish Finish ကိုသုံးနိုင်သည်
သငျသညျမြား၏အထူအတွက်မြို့ရိုးအကြွပ်ကိုဝယ်သင့်ပါတယ် 1.2 စင်တီမီတာသို့မဟုတ်2စင်တီမီတာ.
24 ၏အလေးချိန်×24 ထူအတွက်လက်မကျောက်အုပ်ကြွပ် 1.2 စင်တီမီတာဖြစ်ပါသည် 12 ကီလိုဂရမ်နှင့်2စင်တီမီတာဖြစ်ပါသည် 20 ကီလိုဂရမ်.
ဤရွေ့ကားကြွပ်အလွယ်တကူရိုးရှင်းတဲ့နည်းစနစ်ကို အသုံးပြု. သင်၏မြို့ရိုးပေါ်မှာ paste လုပ်ထားတဲ့နိုင်ပါသည်.
သငျသညျထုံးစံနံရံများပေါ်တွင်အုပ်ကြွပ် paste လုပ်လိုက်ပါသည်ကျွန်တော်တို့ကိုမှ grooving Order နိုင်ပါတယ်. ငါတို့သည်သင်တို့၏လိုအပ်ချက်များကိုနှုန်းအဖြစ် groove စေနိုင်သည်.
သငျသညျ flowery ပုံစံကိုသုံးနိုင်သည် (ပိုပြီးအစေ့) ကာထူးခြားဆန်းပြားကြည့်ဘို့ယူနီဖောင်းရူပနှင့်အထူ ထပ်. ပုံစံနှင့်မိုးအုံ့ပုံစံများအတွက်အစိုင်အခဲအရောင်ပုံစံ.
24 နဲ့ Big အုပ်ကြွပ်×24 လက်မထိုကဲ့သို့သောမျက်နှာစာမြင့်အဖြစ်ကြီးမားသောဧရိယာနိုင်ပါတယ်, ဝင်ပေါက်, အပြင်ဘက်မြို့ရိုးကို.
ကျောက်ထူးချွန်ချောကြာ. သငျသညျရတဲ့အရာတွေနံရံများစေရန်စီစဉ်နေတယ်ဆိုရင်, ဒီတစ်ခုခြွင်းချက်ပစ္စည်းဖြစ်ပါသည်.
သင်တို့သည်လည်းမီးလျှံကိုသုံးနိုင်သည် (ကိုမီးရှို့), သားရေ, Lapataro သင်၏မြို့ရိုးအဘို့ကျောက်အုပ်ကြွပ်အတွက်ပြီးသွား. အားလုံးကျောက်မြို့ရိုးကိုကြွပ်မြင့်မားတာရှည်ခံခြင်းနှင့် weatherproof များမှာ.
ကိုလိုနီခေတ် White ကကျောက် Tile မီးဖိုချောင်ထိပ်
လူအတော်များများဟာဆိုတဲ့အချက်ကိုအတူကျွမ်းတဝင်မရှိသောများမှာ, ကောင်တာများကျောက်အုပ်ကြွပ် အသုံးပြု. ထုတ်လုပ်နိုင်ပါတယ်. အုပ်ကြွပ်၏အရွယ်အစား, အရာကောင်တာများအောင်အတွက်အသုံးပြုကြသည်ယေဘုယျအားဖြင့် 12×12 လက်မနှင့် 12×24 လက်မ.
ရည်ရွယ်ချက်တစ်သားတည်းဖြစ်တည်ခြင်းကျောက်သုံးစွဲဖို့အကြံပြုလိုတယ်ဒါဟာဖြစ်ပါသည်. သငျသညျ Absolute က Black ကျောက်ကိုသုံးနိုင်သည်, Black ကက Galaxy ကျောက်, Tan ကဘရောင်းကကျောက်, မွန်း White ကကျောက်စသည်တို့ကို.
Black က Absolute ကျောက် Tile ရေချိုးခန်းကြမ်းပြင်
ခေတ်မီရေချိုးခန်းထဲမှာ, ကျောက်၏အုပ်ကြွပ်အခင်းများနှင့်ဝတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြသည်. သငျသညျတသားတည်းနှင့်ဗေဒအသွင်အပြင်အဘို့အ Crystalline ကျောက်ကိုသုံးနိုင်သည်.
non-ချောကြမ်းပြင်များအတွက်, သင်သည်သင်၏ရေချိုးခန်းအခင်းအဘို့အသားရေကိုလက်စသတ်ကျောက်အုပ်ကြွပ်ကိုသုံးနိုင်သည်. အဆိုပါသားရေကိုလက်စသတ်နဲ့ချောကျောက်အုပ်ကြွပ်ရေချိုးခန်းအတွင်း skidding ရှောင်ရှား flamed.
သင့်ရေချိုးခန်းအခင်းအဘို့အ Matt ချောကျောက်အုပ်ကြွပ်ကိုသုံးနိုင်သည်. Matt ကျောက်ကွက်များကိုလည်းကြမ်းပြင်ပေါ်ကျသွားတဲ့ကိုရှောင်ကြဉ်ပြီး.
အဆိုပါရေချိုးခန်းအုတ်ရိုးနားမှာကြွပ်ဖြစ်သင့် 1 စင်တီမီတာနှင့်ရေချိုးခန်းကြမ်းပြင်ကွက်များဖြစ်သင့်တယ်2ပိုကောင်းတဲ့စွမ်းဆောင်မှုများအတွက်စင်တီမီတာ.
alaska White ကကျောက် Tile Backsplash
တစ်ဦး backsplash အဖြစ်ကျောက်အုပ်ကြွပ်သည်ဤအုပ်ကြွပ်၏အသုံးအများဆုံးအသုံးပြုမှုများမှာ. backsplash ကျောက်အုပ်ကြွပ်နှစ်မျိုးရှိပါတယ်, ပုံဆောင်ခဲအုပ်ကြွပ်, နှင့်ထူးခြားဆန်းပြားအုပ်ကြွပ်.
ပိုကောင်းတဲ့ပေါင်းစပ်ခြင်းအဘို့အ, သင့်ရဲ့မီးဖိုချောင်ကောင်တာများနှင့်အတူကျောက်၏သေးငယ်တဲ့ backsplash tile ကိုနမူနာကိုသုံးပါ.
သင်ကကောင်တာများနှင့်အတူစစ်ဆေးနေပြီးနောက် Backsplash အုပ်ကြွပ်အဖြစ်အသုံးပြုရန်ပုံဆောင်ခဲကျောက်သို့မဟုတ်ထူ ထပ်. မိုးအုံ့ပုံစံကျောက်ကိုသုံးနိုင်သည်.
တူညီတဲ့အရောင်ကျောက်မီးဖိုချောင်ကောင်တာများနှင့် backsplash အုပ်ကြွပ်အတှကျအသုံးပွုနိုငျသညျ, အဆိုပါမီးဖိုချောင်မှတစ်ဦးထက်ပိုတသားတည်းကြည့်ပေးသော.
သင်တို့တွင်အ backsplash အုပ်ကြွပ်ကိုဝယ်သင့်ပါတယ် 1 စင်တီမီတာသို့မဟုတ်2သင့်ရဲ့မီးဖိုချောင်များအတွက်စင်တီမီတာ. အဆိုပါ groove နှင့် Non-groove backside အတွက်ရရှိနိုင်သော.
ထိုကဲ့သို့သောအထိမ်းအမှတ်အောင်အဖြစ်ကျောက်အုပ်ကြွပ်ပိုပြီးအများအပြားအသုံးပြုမှုရှိပါတယ်, တက်လှေကားများအပြင်, ထမီ, modernly ဒီဇိုင်းအထိမ်းအမှတအောင်.
အများစုမှာမှတ်သားဖွယ်, ကျောက်အုပ်ကြွပ်ဆိုအဆောက်အဦစီမံကိန်းများကျွန်မတို့ဟာခွဲလို့မရတဲ့အစိတ်အပိုင်းများဖြစ်ကြသည်. ကျနော်တို့စံကိုက်ညှိခြင်းနှင့် Non-စံကိုက်ညှိတွေနဲ့ကွဲပြားခြားနားပြီးအတွင်းကျောက်အုပ်ကြွပ်အမျိုးအစားအားလုံးကိုထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်တင်ပို့. သငျသညျကွဲပြားခြားနားသောအရွယ်အစားနှင့်အထူအတွက်အိန္ဒိယကနေအရည်အသွေးမြင့်ကျောက်ကွက်များတင်သွင်းခြင်းကိုဆက်သွယ်နိုင်သည်.